GmbH ကိုဆွစ်ဇာလန်၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် LLC
သင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
Million Makers Switzerland သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့် 109 နိုင်ငံများအတွက် Clients များထံအခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုပေးသည်။
သင်၏ဆွစ်ဇာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကိရိယာများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
သင်၏ဆွစ်ဇာလန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ဘဏ်ငွေစာရင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ဆွစ်ဇာလန်အတွက် Virtual နံပါတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်အတွက် CRM Solutions၊ ဆွစ်ဇာလန်အတွက် virtual ရုံး၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း၊ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ယနေ့သင်၏ဆွစ်ဇာလန် GmbH အမည်ကိုရယူပါ။
သင်၏ Switzerland GmbH အမည်ကိုရှာပါ
ဆွစ်ဇာလန်၏စည်းမျဉ်းခံမြို့တော်မှာ Bern ဖြစ်သည်။ Lausanne သည်တရား ၀ င်အာရုံစိုက်ရာနေရာတွင်ရှိသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏အရွယ်အစားသေးငယ်မှု - ၎င်း၏ဒေသတစ်ခုလုံးသည်စကော့တလန်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီး၎င်း၏လူ ဦး ရေသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ကိုအနည်းငယ်သာသိသာစေသည်။
ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံများဖြစ်သောတောင်တန်းများ၊ မြင့်မားသော Alpine ရေကန်များ၊ ချိုင့်ဝှမ်းချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်ချိုသာသောမြို့များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောမြို့ကြီးများနှင့်အဟောင်းနှင့်အသစ်များကိုရောနှောနေသောမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ဆွစ်ဇာလန်သည်အနောက်ဥရောပ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးမြေမျက်နှာသွင်ပြင်၏ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။ နှစ်ခု၎င်း၏ဝိသေသထူးချွန်နှင့်၎င်း၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ နှစ် ဦး စလုံး၏အစိတ်အပိုင်းများသည်တိုင်းပြည်အတွက်အကျယ်တဝင့်ဖြစ်လာသည်။ သူ၏အမည်ဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိပညာရှင်များ၊ အထူးကုများ၊ ဓာတ်ပုံပညာရှင်များနှင့်ပွင့်လင်းသောလေအားကစားသမားများအားအမြင့်မြတ်ဆုံးသောအဲလ်ပ်တောင်တန်းများကိုဖြတ်ထားသောရေခဲပြင်၏ပုံများကိုဆင့်ခေါ်သည်။
အချို့သောအပယ်ခံများအတွက်ဆွစ်ဇာလန်သည်ယခုအချိန်တွင်ခေတ်နောက်ကျနေသည့်သာယာဝပြောပြီးစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုထပ်မံဆင့်ခေါ်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်သည်ကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးစည်းစနစ်ကျနစွာနေထိုင်သော်လည်း၎င်း၏တောင်တန်းများရှိချိုင့်ဝှမ်းများမှာပတ်ဝန်းကျင်ရှိဂီတအဖွဲ့၏တေးဂီတကိုသံခမောက်သို့မဟုတ် alphorn ထက်ထပ်ခါတလဲလဲပြန်ပြောပြရန်မလွယ်ကူပါ။ ဆွစ်လူမျိုးအများစုသည်မြို့ကြီးများနှင့်မြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများ၌နေထိုင်ကြပြီးနိုင်ငံ၏လူကြိုက်အများဆုံးစိတ္တဇအလုပ်ဖြစ်သော Johanna Spyri's Heidi (၁၈၈၀-၈၁) မှတစ်ဆင့်ကမ္ဘာကိုစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောပြည်နယ်မြင်ကွင်းများတွင်မဟုတ်ပါ။ ဆွစ်ဇာလန်၏မြို့ပြဒေသများသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်သွယ်မှု၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီး၊ ပိုကြီးသည့်ကမ္ဘာကြီးနှင့်ဆက်နွှယ်သည်။ ဂျီနီဗာသည်ဆွစ်ဇာလန် - ဂျီနီဗာ - ဥပဒေပြုရေးနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအသင်းအဖွဲ့များပြသခြင်းအတွက်အဓိကကျသောအဖွဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းမှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခိုင်မာတောင့်တင်းပြီးဘက်လိုက်မှုကင်းမဲ့စွာစောင့်ကြည့်နေသောဘက်လိုက်မှုကင်းမဲ့မှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်ကုလသမဂ္ဂနှင့်ဆက်စပ်သောများစွာသောအသင်းအဖွဲ့များပါဝင်သည်။ ၂၁ ရာစုအထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ဆွစ်ဇာလန်သည်အနောက်ဥရောပဒေသတွင်တည်ရှိပြီးတွက်ချက်ထားသောအလုပ်များနှင့်အခြားအရေးပါသောစီးပွားရေးလေ့ကျင့်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးရာသီဥတုကိုပေးသည်။ ဆွစ်ဇာလန်သည်ယင်း၏အဓိကကျသည့်နေရာဖြစ်သောကြောင့်ငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းသောနိုင်ငံများဖြစ်သည့်ဂျာမနီ၊ အီတလီနှင့်ပြင်သစ်တို့နှင့်နီးစပ်သည်။ ဤအချက်များအရဆွစ်ဇာလန်သည်ဥရောပဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရန်လိုအပ်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ထူးခြားသောအစဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသောဥရောပကိုကျော်လွှားရန်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီဆွစ်ဇာလန်သည်ပစ္စည်းအသစ်များသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်များအတွက်စမ်းသပ်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆွစ်ဇာလန်ကျောင်းများသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရပ်တည်မှုကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်၏သင်ကြားပို့ချမှုပုံစံသည်လူမှုရေးနှင့်ဘာသာစကားကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ဆွစ်ကျောင်းများသည်ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်နှင့်အီတလီဘာသာစကားသုံးမျိုးကိုသင်ကြားပို့ချသော်လည်းအင်္ဂလိပ်သည်လည်းအလွတ်သဘောရှေ့ဆက်ဘာသာစကားဖြစ်လာသည်။ အကြောင်းမှာအင်္ဂလိပ် - Saxon အဖွဲ့အစည်းမြောက်မြားစွာကိုအနီးအနားရှိစီးပွားရေးအခြေအနေသို့ညှိနှိုင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤစွမ်းရည်များကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဘာသာစကားစွမ်းရည်ရှိသောအလုပ်သမားအင်အားဖြင့်လူသိများသည်။
နိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်သော်လည်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အချို့တွင်လူသိများသည်။ ဥပမာဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အကာအကွယ်၊ ဇူးရစ်နှင့်ဂျီနီဗာတို့သည်ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဓိကအာရုံစိုက်ရာဖြစ်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်သည်အလားတူပင်၊ အထူးသဖြင့်ရေနံလဲလှယ်မှုနှင့်အကန့်အသတ်မရှိသောစီးပွားရေးအတွက်အဆင့်များဖလှယ်သည့်အဓိကကုန်ကြမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောစက်မှုလုပ်ငန်းစုအရေအတွက်ရှိခြင်း, ဆွစ်ဇာလန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအောင်အတွက်၎င်း၏အမြတ်အစွန်းကြောင့်လုပ်သောသိသိသာသာလိုင်စင်အရေအတွက်, အဘို့အစဉ်မပြတ်တောင်းခံကြောင်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ ဆွစ်ဇာလန်ကောလိပ်များနှင့်စူးစမ်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအထူးကျွမ်းကျင်သူများကိုထုတ်လုပ်ပြီးစာမေးပွဲနယ်ပယ်တွင်ထူးခြားသောရလဒ်များရရှိသည်။
လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှု၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကျေနပ်မှုနှင့်လုံခြုံသောစီးပွားရေးအခြေအနေများကြောင့်ဆွစ်ဇလန်သည်မရင်းနှီးသောစျေးကစားသူများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတွင်လျောက်ပတ်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုမူဘောင်၊ အများပြည်သူသုံးယာဉ်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်နေထိုင်ရန်အဆင်သင့်မြောက်မြားစွာသောကျွမ်းကျင်သူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဆွဲဆောင်သောကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိအနှစ်သာရအရှိဆုံးမြင်ကွင်းနှင့်အနီးကပ်ရှိသည်။
အများပြည်သူသုံးမော်တော်ယာဉ်ဘောင်၏မယိမ်းယိုင်သောအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်မည်သူမဆိုနိုင်ငံအတွင်းပတ် ၀ န်းကျင်သို့လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ပြီးကျယ်ပြန့်သောလမ်းဘေးအဖွဲ့အစည်းကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုတွင်ထူထောင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်ရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမှစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုစတင်ရန်နှင့်ဆွစ်ဇလန်တွင်ကျွမ်းကျင်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၀ ယ်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်၏ virtual နံပါတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိ CRM Solutions၊ ဆွစ်ဇာလန်ကုန်သည်အကောင့်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်ငွေပေးချေခြင်းတံခါးပေါက်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Web development၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိ Ecommerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစသည့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အိုင်တီနည်းပညာဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်နိုင်ငံရပ်ခြားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ဆွစ်ဇာလန်သို့မဟုတ်သင်၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောကျွမ်းကျင်သည့် ၀ န်ထမ်းများ၊ ဆွစ်ဇလန်တွင်စီးပွားရေးရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင် virtual နံပါတ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဆွစ်ဇလန်တွင်စီးပွားရေးအတွက်တန်ဖိုး၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအီးကောမတ်စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိအက်ပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုဆွစ်ဇာလန်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်အတွက် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ GmbH အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာဆွစ်ဇာလန်နဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ WE ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အဖြေတစ်ခုပေးနေသည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆွစ်ဇလန် (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဆွစ်ဇလန် (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆွစ်ဇလန်
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဆွစ်ဇလန်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက် Chop and Seal
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ GmbH အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● GmbH ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကြေး (ပထမနှစ်) - ဒေါ်လာ ၃၀၀၀
●ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၃၉၁၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားအမည် ၃ ခုပေးပါ)
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ GmbH အတွက်သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုတင်သွင်းခြင်း
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ GmbH အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခကြေးငွေများကိုတစ်နှစ်ပေးဆောင်ရမည်
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ GmbH အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးခြင်း
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ GmbH အတွက်ကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးတစ်နှစ်ပေးအပ်ခြင်း
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိသင်၏အတွက် GmbH အတွက်စံပြအဖွဲ့လိုက်စာရွက်စာတမ်းများ၊ အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင်ဆွစ်ဇလန်တွင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
GmbH အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ GmbH အတွက်ဒါရိုက်တာ
GmbH ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
GmbH အတွက် Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / အစုရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
GmbH အတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်ဆွစ်ဇာလန်၌တည်၏
သင်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုလျှင်ဆွစ်ဇလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆွစ်ဇလန်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်မည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွစ်ဇာလန်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အမြောက်အမြားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီများအတွက်ဆွစ်ဇာလန်မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီပေးပါမည် ကျွန်တော်တို့မှတဆင့်ဆွစ်ဇလန်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဆွစ်ဇာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်၊ သင်နှင့်သင်တို့၏မိသားစုအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်လျှောက်ထားလိုပါကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သောကျွမ်းကျင်မှုများ အဘို့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဆွစ်ဇလန် ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇလန်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်၌တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းမှုပေးသည်။ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွစ်ဇာလန်တွင် GmbH အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဆွစ်ဇာလန်၌ LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှပင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးအဖြေများအားအစမှအဆုံးထိပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားစီးပွားရေး၏စီးပွားရေးကြောင့် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်“ ဆွစ်ဇလန်တွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ GmbH အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရှိသော GmbH အတွက်ဝန်ဆောင်မှုများမှာ
ရှယ်ယာရှင်များအတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ GmbH အတွက် GmbH အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
GmbH အတွက်ဆွစ်ဇာလန်၊ LLC တွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ GmbH အတွက်လက်မှတ်ကိုမျှဝေပါ။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရှိသော GmbH၊
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါလျှင်, ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ဆွစ်ဇာလန် / LLC အတွက် GmbH ။
GmbH သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရှိသော GmbH နှင့် LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ GmbH / ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် LLC ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်သည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မပါဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှပေးအပ်သည့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ခွင့်ပြုချက်မပေးပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers မှဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်လိုင်စင်မပါသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ထီ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ် / အရောင်းအ ၀ ယ်၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္basedာရေးနှင့်ကုန်စည်ကိုအခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်အခြားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိငွေရေးကြေးရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်လဲလှယ်ခြင်း၊
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်လောင်းကစားလိုင်စင်ချထားရန်အတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်နိုင်ငံ ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်သာမကနိုင်ငံတကာဆွစ်ဇာလန်တွင် Professional CFA၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများဖြင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကြီးမားသောအစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၉ ခုတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များအားကူညီသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Corporate Services | ဂျီနီဗာရှိ Corporate Services | Zurich ရှိ Corporate Services | Basel ရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ | Bern အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှုများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Corporate Services
ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်၌ကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Offshore Company တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | ဂျီနီဗာရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Zurich ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Basel ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Bern အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
ဆွစ်ဇာလန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဆွစ်ဇလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဆွစ်ဇလန်.
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Accounts Outsourcing
သင့်ကုမ္ပဏီကိုသင်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ထည့်သွင်းထားပြီးသင်ပြင်ပပြောင်းနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဆွစ်ဇာလန်၌တည်၏။
HR အတိုင်ပင်ခံ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ပေးအပ်ထားသည့်သင်၏ HR ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ဆွစ်ဇာလန်တွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်း"ဆွစ်ဇာလန်၌တည်၏
ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဆွစ်ဇလန်.
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ဆွစ်ဇာလန်ကနေကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ သင်၏ဆွစ်ဇလန်ရှိသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် ဆွစ်ဇာလန်ရှိ Business VoIP အပါအဝင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များဆွစ်ဇလန်ရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဆွစ်ဇလန် ဆွစ်ဇာလန်တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆွစ်ဇလန်, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် CryptoCurrency ဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသောဆော့ဝဲလ်ဆွစ်ဇာလန် | စျေးနှုန်းချိုသာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်ရှာဖွေသူများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ ဦး စားပေးမှုကိုခွင့်ပြုသည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအဘယ်အရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီမည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ဆွစ်ဇာလန်၌သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဂူဂဲလ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းဆွစ်ဇာလန်၌ GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင် GmbH တည်ထောင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ပြုလုပ်သော GmbH မှဆွစ်ဇာလန်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိ Offshore GmbH တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Switzerland GmbH ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွီဒင် GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန် GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် GmbH ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် GmbH တည်ထောင်ခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု | LLC ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Sarl မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း IBC ဆွစ်ဇာလန်၌ဖွဲ့စည်းခြင်း | ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ဆွစ်ဂျာမန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်တည်ထောင်သည် ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဇာလန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင် LLC ဖွဲ့စည်းသည့်နိုင်ငံခြားသားများအားလည်းဆွစ်ဇာလန်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ပြုလုပ်သော LLC မှဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ပြုလုပ်သော LLC ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိသောကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , ဆွစ်ဇာလန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆွစ်ဇာလန် LLC မှတ်ပုံတင်, ဆွစ်ဇာလန် LLC မှတ်ပုံတင်, ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသည့်နိုင်ငံခြားသားများအားလည်းဆွစ်ဇာလန်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဖွဲ့စည်းသည့်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီ၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီခွဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆွစ်ဇာလန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင် Sarl ဖွဲ့စည်းမှုရှိနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Sarl မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင် Sarl မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကမ်းလွန် Sarl ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိကမ်းလွန် Sarl မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကမ်းလွန် Sarl မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , ဆွစ်ဇာလန် Sarl ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆွစ်ဇာလန် Sarl မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆွစ်ဇာလန် Sarl မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် Sarl ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် Sarl မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသည့်နိုင်ငံခြားသားများအားလည်းဆွစ်ဇာလန်တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိသော IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင် IBC ဖွဲ့စည်းမှုရှိနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းဆွစ်ဇာလန်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , ဆွစ်ဇာလန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆွစ်ဇာလန် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆွစ်ဇာလန် IBC မှတ်ပုံတင်, ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဖွဲ့စည်းသည့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားသားများအားဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဂျာမန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဇာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ပြုလုပ်သောဆွစ်ဇာလန်တွင်ဖွဲ့စည်းသည့်ဆွစ်ဇာလန် GmbH၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကမ်းလွန်ဆွစ်ဇာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဂျာမန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ဆွစ်ဂျာမန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ဆွစ်ဂျာမန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ်းလွန် Swiss GmbH ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်ကမ်းလွန် Swiss GmbH မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Offshore လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီ၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှလီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဇာလန်အခြေစိုက် Swiss LLC ဖွဲ့စည်းမှုဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဆွစ်ဇာလန်၌ဆွစ်ဇာလန်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဇာလန်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ပြုလုပ်သောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်အခြေစိုက်သောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ LLC တွင်ဆွစ်ဇာလန်၌ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန် Swiss LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန် Swiss LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန် Swiss LLC တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
GmbH ကိုဆွစ်ဇာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ LLC ကိုဆွစ်ဇာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ဆွစ်ဇာလန်၌ LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Sarl ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ ဆွစ်ဇာလန်၌ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် IBC ကိုဆွစ်ဇာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Swiss GmbH ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်လီမိတက်တာဝန်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Swiss LLC ကိုဆွစ်ဇာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှကုမ္ပဏီများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီကိုထောက်ပံ့သည်။ ဆွစ်ဇာလန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျီနီဗာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဂျီနီဗာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျီနီဗာရှိကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဇူးရစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဇူးရစ်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Zurich မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှဇူးရစ်မှမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘေဆယ်လ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘေဆယ်လ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘေဆယ်လ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘေဆယ်လ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘေဆယ်လ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bern မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Bern မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Bern မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ကုမ္ပဏီမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆွစ်ကုမ္ပဏီမှတရားဝင်မှတ်ပုံတင်၊ ဆွစ်ကုမ္ပဏီမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဂျီနီဗာ၌စျေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်း | Zurich တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဘေဆယ်တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Bern အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆွစ်ဇာလန်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆွစ်ဇာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များမှအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်။ ဂျီနီဗာရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂျီနီဗာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဂျီနီဗာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂျီနီဗာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂျီနီဗာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂျီနီဗာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဇူးရစ်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဇူးရစ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဇူးရစ်ရှိဇူးရစ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ ဇူးရစ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဇူးရစ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘေဆယ်လ်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘေဆယ်လ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘေဆယ်လ်ရှိဘေဆယ်လ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘေဆယ်လ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Bern ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Bern ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Bern ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Bern ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Bern ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Bern ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆွစ်ကုမ္ပဏီ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ ဂျီနီဗာရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Zurich တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Basel တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ Bern တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
သင်ဆွစ်ဇာလန်တွင်တတ်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ ဆွစ်ဇာလန်မှာဆွစ်ဇာလန်မှာအနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနဲ့ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုပေးတယ်။ ဂျီနီဗာရှိဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဂျီနီဗာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများဂျီနီဗာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဂျီနီဗာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဂျီနီဗာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဇူးရစ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဇူးရစ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဇူးရစ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဇူးရစ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘေဆယ်လ်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘေဆယ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘေဆယ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘေဆယ်လ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဘာ့တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဘန်းတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဘာ့တွင်ဘာနာရှိကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဘန်းရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိသောဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဂျီနီဗာရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Zurich တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Basel တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Bern တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် setup ကုမ္ပဏီ၊ ဆွစ်ဇလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီထည့်သွင်း၊ ဂျီနီဗာတွင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ ဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီထူထောင်၊ ဂျီနီဗာရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဇူးရစ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်ထောက်ပံ့သောမြို့များ၊ Zurich တွင် Zurich တွင် setup ကုမ္ပဏီ၊ Zurich တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သည်။ Zurich တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းသည်။ Basel တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်မြို့ကြီးများတွင်အခြေစိုက်ပြီး Basel တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည်။ Basel တွင်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်သည်။ ဘေ့စ်တွင်အခြေစိုက်သည့်ဘေဆယ်လ်မြို့၊ မြို့တွင်ဘာနာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်ကူညီနိုင်သည့်မြို့များ၊ ဘန်းတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဘန်းတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ac ဆွစ်ကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ ဆွစ်ကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ ဆွစ်ကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ ဆွစ်တွင် setup ကုမ္ပဏီ၊ ဆွစ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ၊ ဆွစ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းပါ။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ဂျီနီဗာမြို့တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Zurich တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ဘေဆယ်လ်တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Bern အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျီနီဗာတွင်နေထိုင်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဂျီနီဗာရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ဂျီနီဗာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဇူးရစ်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဇူးရစ်တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်စာရင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ဇူးရစ်တွင်မှတ်ပုံတင်၊ နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘေဆယ်လ်၊ ဘေဆယ်လ်တွင်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘေဆယ်လ်တွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘန်းတွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘာလင်တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘာနက်တွင်ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘဏ်အကောင့်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဆွစ်အတွက် tion ။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုဆွစ်ဇာလန် | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများဂျီနီဗာ | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Zurich | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများဘေဆယ်လ် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Bern | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုဆွစ်ဇာလန်
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆွစ်ဇာလန်တွင်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဇာလန်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဇာလန်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စရိတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်, ဆွစ်ဇာလန်၌ကုမ္ပဏီကုန်ကျခဲ့သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆွစ်ဇာလန် | စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးကိုဂျီနီဗာရှိ | စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Zurich | စျေးသက်သာတဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး စျေးနှုန်းသင့်တင့်သောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Bern | စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ဂျီနီဗာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Zurich တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု Basel တွင်ထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် Bern တွင်ထည့်သွင်းပါ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
GmbH ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Sarl မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ဆွစ်ဂျာမန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်၌ဆွစ် LLC မှတ်ပုံတင်?
Inc ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် GmbH ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Incorporate LLC ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Incorporate LLC ကုမ္ပဏီ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Sarl ထည့်သွင်းပါ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ IBC ကိုဆွစ်ဇာလန်တွင်ထည့်သွင်းပါ ဆွစ်ဇာလန်၌ဆွစ်ဇာလန် GmbH ထည့်သွင်းပါ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဇာလန် LLC
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ဆွစ်ဇာလန်တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောပမာဏနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်လူသိများသောဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှပေးအပ်သည်။ ဆွစ်ဇလန်တွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဇူးရစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘေဆယ်လ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘာလင်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နေထိုင်သူများမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများအားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးထောက်ပံ့သည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်တည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။ အလားတူဆွစ်ဇာလန်တွင်လည်းဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဂျီနီဗာတွင်တည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဂျီနီဗာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဂျီနီဗာသည် Zurich တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Zurich တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Zurich တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Zurich တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Zurich တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Zurich တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Zurich တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဘေဆယ်လ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဘေဆယ်လ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဘေဆယ်လ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဘေဆယ်လ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဘေဆယ်လ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဘေဆယ်လ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Bern သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် Bern တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Bern တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Bern တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Bern တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Bern တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဂျီနီဗာရှိစျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Zurich တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘေဆယ်တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Bern အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Eidgenössischesဌာနမှ ferg auswärtige Angelegenheiten (EDA)
စာရင်းအင်း Schweiz - Bundesamt မှစာရင်းအင်း
ဆွစ် Alpine ဒိန်ခဲ
Edelweiss Air လေကြောင်းလိုင်း
Flughafen ဘေဆယ် Mulhouse
ဆွစ်မီးရထား - SBB
Destination Switzerland - ခရီးသွားခြင်းနှင့် Tour ည့်လမ်းညွှန်များ
Jura & သုံးရေကန်
ဆွစ်ဇာလန် Deluxe ဟိုတယ်များ
ပြတိုက် Jean Tinguely
ဘီဘီစီနိုင်ငံအကြောင်း - ဆွစ်ဇာလန်
World Factbook - ဆွစ်ဇာလန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ - ဆွစ်ဇာလန်
FAO - ဆွစ်ဇာလန်
နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များ - ဆွစ်ဇာလန်
အမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်း - ဆွစ်ဇာလန်
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - ဆွစ်ဇာလန်
Banque Algérienne du စီးပွားကူးသန်းExtérieur SA
Schroder & Co ဘဏ် AG
Citi ပုဂ္ဂလိကဘဏ် (ဆွစ်ဇာလန်)
Dresdner ဘဏ် (Schweiz) AG
Deka (ဆွစ်ဇာလန်) Privatbank AG
Lloyds TSB Bank Plc၊ လန်ဒန်၊ Zweigniederlassung Zürich
HSBC ပုဂ္ဂလိကဘဏ် (Suisse) SA
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံးလုံးလျားလျားဆန့်ကျင်နေသဖြင့်ဤကဲ့သို့သော Client များကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဆွစ်ဇလန် အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံထဲမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆွစ်ဇာလန်ဥပဒေအောက်မှာလူမည်းစာရင်းဝင်ထားတဲ့တရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုခုသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီကိုမထောက်ပံ့ပေးပါဘူး။
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေမျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ဖြစ်စေ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံတွင်းမှသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ဖြစ်စေ၊
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာအေဂျင်စီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့၊ သို့မဟုတ်ဘာသာရေးသာသနာရေးနှင့် ၄ င်းတို့ရဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမထားဘူး။
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေအခြေခံဆွစ်ဇာလန်တွင်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုအတွက်ဆွစ်ဇာလန်ရှိသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းပစ္စယများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဆွစ်ဇလန်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဆွစ်ဇလန်, ဆွစ်ဇလန် ဘဏ်အကောင့်, ဆွစ်ဇလန် ယုံကြည်မှု ဆွစ်ဇလန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဆွစ်ဇလန်။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-switzerland/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-switzerland/ မှလာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-switzerland/